IMBALI YEHOTELE ICECIL | KONKE UKUSWELEKA KUMBULALI OBULALAYO KUHLALA KWI-NETFLIX DOC - IRADIO TIMES - ULWAPHULO-MTHETHO LWENENE
Imbali yehotele yaseCecil: Yeyiphi ingxelo yamaNetflix engakuxeleli ngendawo yokuhlala eLos Angeles
I-Netflix's documentary Crime Scene entsha: Ukulahleka kwiCecil Hotel kujolise ekukhanyeni ukufa okungummangaliso komfundi oneminyaka engama-21 waseCanada u-Elisa Lam.
Ngomhla we-19 kuFebruwari, 2013, umzimba ka-Elisa wafunyanwa kwitanki lamanzi ngaphezulu kwehotele esekwe e-LA, kwiiveki emva kokulahleka kwakhe ngomhla wokuqala kwinyanga yoMdumba.
Nangona kunjalo, ukusweleka kuka-Elisa ayisiyiyo eyokuqala kunye neyimfihlakalo eyenzeka eCecil Hotel, enehotele eyaziwa ngokuba nembali yayo ende kunye nebuhlungu yokubulala, ukuzibulala kunye neziganeko ezingachazwanga.
Abo babukele iNetflix's I-Stalker yasebusuku Mhlawumbi sele uqaphele ukuba uRichard Ramirez wayehlala apho ngelixa ebulala, kwaye kwindawo yokuvula iCrime Scene, umfanekiso kaRamirez uboniswa.
Kwakukho nezinye izehlo ezininzi ehotele ubunyani obungathethiyo.
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nehotele eboniswe kuthotho lweNetflix, kubandakanya zonke izehlo ezenzeke apha okanye kufutshane, ababulali ababulalayo abahlala apho nokuba isavulekile na namhlanje.
Uphi iCecil Hotel?
Ihotele iCecil yakhiwa ngo-1920 nguRobert H. Schops eDowntown Los Angeles.
Ngamagumbi angama-700, indawo yokubambela emarmore, imithi yesundu kunye neefestile zeglasi, ihotele yakhiwa ngomnqweno omkhulu, nangona kunjalo, kwiminyaka emihlanu kamva xa ukudodobala okukhulu kwaqala izinto zajika ngendlela eyahlukileyo kwaye ihotele yaqala ukwaziwa njengendawo yokuhlangana. abathengisi ngemizimba nezikrelemnqa.
Ngo-2011, ihotele yabizwa ngokuba yi-Stay on Main hotel. Kwiminyaka emine kamva, kwi-2015, kwafunyanwa umzimba wendoda ekuthiwa yabulawa ngokuzibulala.
Ihotele iCecil yabizwa ngokuba yi-Stay on Main hotel
Ngaba iCecil Hotel ivuliwe? Ungahlala apho?
Impendulo kuyo yomibini le mibuzo nguhayi.
Ngo-2016, kwabhengezwa ukuba ihotele iya kuba nokuvuselelwa kwezigidi ezili-100 zeedola, nangona kungakhange kubekho kuhlaziyo malunga nexesha okanye ukuphinda kuvulwe. Kuxelwe ukuba indawo iyajikwa ibe ziiflethi.
Ihotele kuthiwa yeyonkuthazo yexesha lesihlanu leMbali yaseHoror yaseMelika: Ihotele.
Imbali yeCecil Hotel: Into i-Netflix doc engakuxeleliyo
Ukufa kuka-Elisa Lam
Ukufa okungaqondakaliyo okwenzeka kwiCecil Hotel kukunyamalala kunye nokufa komfundi oneminyaka engama-21 u-Elisa Lam, ekujoliswe kuyo kwi-docuseries entsha yeNetflix.
Kwiiveki ezintathu emva kokuxelwa ukuba ulahlekile, uElisa Lam wafunyanwa eswelekile kwitanki lamanzi eluphahleni lwehotele.
Ividiyo ye-CCTV ka-Elisa ngaphambi nje kokuba anyamalale yangena kwimithombo yeendaba. Ividiyo ye-Elisa Lam yabelwana ngamapolisa ngethemba lokuqokelela ubungqina.
Kukho iingcamango ezahlukeneyo ze-Elisa Lam ezijikeleze ityala elingaqondakaliyo, kwaye ngoJuni 2013, amagosa athi wasweleka ngokuntywila ngengozi.
Funda ngakumbi kwi Kwenzeka ntoni ku-Elisa Lam ?
I-Stalker yasebusuku uRichard Ramirez wayehlala e-Cecil Hotel
URichard Ramirez - aka The Night Stalker- uyaziwa ukuba wayehlala ehotele ngexesha lokubulala kwakhe.
Wayehlala kwigumbi elikumgangatho ophezulu wehotele kwaye wahlawula i- $ 14 (£ 10.12) ngobusuku ukuze ahlale apho.
Ngokweengxelo, uRamirez wayeza kuphosa iimpahla zakhe ezinegazi kwindawo yokulahla inkunkuma yehotele, emva koko ahambe aye kwigumbi lokungenela ehamba ze okanye ezambatho zakhe zangaphantsi kuphela.
Zininzi iziganeko ezingaqondakaliyo
Ukuzibulala kokuqala kwenzeka ehotele ngo-1931. Indoda egama linguW. K. Norton waseManhattan wafunyanwa eswelekile egumbini lakhe emva kokutya iipilisi zeetyhefu.
Wayejonge ehotele kwiveki ephelileyo phantsi kwegama elithi James Willys.
Inye into esele iqatshelwe malunga nokuzibulala kwabantu okwenzeke ehotele ngabantu abangena phantsi kwamagama obuxoki. Iindwendwe ezininzi ezisweleke ngale ndlela bezingaziwa emva kokubhubha kwazo, ezinye zisaziwa nanamhlanje.
Ityala likaDorothy Jean Purcell
Ngo-1944, uDorothy Jean Purcell oneminyaka eli-19 ubudala wangena ehotele kunye nesoka lakhe elineminyaka engama-38 ubudala uBen Levine. Ngokweengxelo, uDorothy wayengazi ukuba ukhulelwe kwaye ngobunye ubusuku xa wayesiya kwindlu yangasese wazala umntwana oyinkwenkwe.
Ekholelwa ukuba umntwana wakhe ubhubhile, uDorothy emva koko waphosa umntwana omtsha ngefestile. Wabanjwa ngenxa yokubulala kwaye kwityala lakhe wafunyanwa enetyala ngesizathu sobudenge.
Ukuzibulala kuka-Pauline Otton kukhokelele ekufeni kwesibini
Esinye sezona zenzo zokuzibulala ezidume kakubi seso sikaPauline Otton njengoko sasikhokelela ekubhubheni komntu owayedlula ngendlela. Ngo-1962, uPauline waphuma ngefestile emva kwengxabano nomyeni wakhe.
Wafika kwindoda eneminyaka eyi-65 egama linguGeorge Gianinni, owayedlula ngelo xesha.
Kuqala kwakucingwa ukuba i-duo yayixhume kunye, nangona kunjalo, ubungqina buphelile ukuba uGeorge wayefake izandla zakhe ezipokothweni nasezihlangu, kungoko uPauline kufuneka ewele kuye.
U-Elizabeth mfutshane -Ukubulawa kwabantu abamnyama eDahlia
Ukubulawa kuka-Elizabeth Short okungasombululekiyo kukubulala kokuqala okwaziwayo okunxulunyaniswa neCecil Hotel.
Ngo-1947, umzimba wakhe wafunyanwa kubini epakini ekufuphi kwindawo yokuhlala.
Ukusweleka kwakhe kuhlala kungasombululwanga nanamhlanje, nangona bebebaninzi abarhanelwa kunye nabantu abathi bambulala.
U-Elizabeth wanikwa igama lesidlaliso ngo-Black Dahlia ngamajelo eendaba njengoko ukufa kwakhe kunye nokubulala kuqhubeka kuthethwa ngaye, ngakumbi kwinkcubeko ye pop. Kutshanje, ibhekisiwe kwisiqendu se Ibali laseMelika laseMelika .
Ukubulawa kukaPigeon Goldie Osgood
Oku kokunye ukubulala okungasombululwanga okwakwenzeka e-Cecil Hotel. Ngo-1964 uPigeon Goldie Osgood - umhlali walapho - wafunyanwa sele eswelekile egumbini lakhe.
Indoda egama linguJacques B. Ehlinger yabanjwa ngenxa yokubulawa kwakhe kuba wabonwa kule ndawo emva kokunxiba iimpahla ezinegazi, nangona kunjalo, kamva wakhululwa kwaye akabekwa tyala ngokubulala kwakhe.
UJack Unterweger (umbulali obulalayo) naye wayehlala eCecil Hotel
I-Cecil Hotel kamva yaba yindawo yokuhlala omnye umbulali obulalayo-ngeli xesha umbulali wase-Austrian uJack Unterweger owabulala phakathi kwabantu abali-12 ukuya kweli-15.
Wagwetywa ubomi entolongweni ngo-1976 ngokubulala intombazana eneminyaka elishumi elinesibhozo. Nangona kunjalo, isicelo sango-1985 saqala ukuba axolelwe, kwaye ekugqibeleni wakhululwa ngo-1990.
Kunyaka kamva, wayehlala e-Cecil Hotel athe wakhetha ngenxa yokudibana kwayo neRamirez.
Amapolisa afumanisa ukuba u-Unterweger wayebulele abasetyhini abasibhozo eYurophu ababulawa bonke ngeebra zabo.
U-Unterweger ekugqibeleni wabanjwa kwaye wahlawuliswa nge-11 yokubulala, kubandakanya ezintathu ezenzeka e-LA.
Ngobusuku wagwetywa, u-Unterweger wasweleka ngokuzibulala.
Ulwaphulo-mthetho: Ukulahleka kwiCecil Hotel kuyafumaneka ukusasaza kwiNetflix. Ufuna enye into ukuba ubukele? Jonga isikhokelo sethu seTV.
u-boris wenza uhlaziyo namhlanje
iipokotho ezizikwere ezigoqekayo
ndiqala nini usaziwayo
1 11 ixesha
ngaphambi kokuba sife isizini yesi-2
xa iBritane inetalente